HS:- Markii aan siyaasada guud ee manta taalo dalka siiba qaabkii qaldanaa ee ay sida sahlan ugu bur burayeen xukumadahii is xig xigay wxaa dhamaantood sabab u ahaa labo shaqsi oo la sheego iney ka tirsan yahiin xisbiga madaxweynaha kuwaasi oo kala ah wasiirka Cadaalada Farax Cabdulqaadir iyo Xeer ilaaliyaha qaranka.
Dabcan labadaan shaqsi waxey ku dhasheen kuna barbaareen dalka Ethiopia waana shaqsiyaadka bulshada Soomaaliyeed karaamada ka qaaday tan iyo markii ay siyasada ku biireen xukunkana la wareegeen xisbiga madaxweynaha.
Hadaan soo koobno xeer ilaaliyaha qaranka haduu ba jiro masuul dowlada ka tirsan oo musuq maasuq faraha kula jira kaalinta 1aad ayuu ku jiraa, waxuuna horey ula soo shaqeeyey siyasigii weynaa Cabdul Majiid Xuseen oo madax ka soo noqday kana mid ahaa horaantii sagaashameeyadii dowladii ugu horeysay ee uu soo dhiso Malez Sanaawi ilaa uu maxkamadaha Ethiopia ka soo shaqeeyo.
Waa shaqsi si dadban iyo si toos ahba ay Soomaalida u sheegaan inuu dowlada Soomaaliya ugu jiro dowlada Ethiopia, sidoo kale isaga iyo Faarax Cabdulqaadir waxaa labadoodaba iskaka dhexyaacsan siyaasada iyo danaha qabiilka.
Madaxweynaha Soomaaliya waxey labadan masuul u fashiliyaan si aan horey loo arag weyna ka awood badan yahiin isaga mararka qaarkood marka loo eego ficiladooda dad badan waxey hada ku mashquulsan yahiin ururka Dam-Jadiid laakisne Soomaalida maanta nool uma daneyn labadan shaqsi cidii ka danbeysay in ay dalka Soomaaliya wax ka noqdaan.
Waxaan ka gaabsanay arimo badan oo xasaasi ah sidaasi daraadeed hadiiba ay maanta dalka Soomaaliya bulshadiisu weli u nool yahiin dad damiir leh wadanka si deg deg ajh halooga qabto shaqsiyaadka noocaan ah waa hadalada kooban oo anau tiro bulshada ka tirsan ka maqalnay.
Dowladeey xaal qaado
· admin on January 27 2015 02:03:27 · 0 Comments · 1455 Reads ·
14,579,221 unique visits